Amalitere m ide edemede ... | Martech Zone
Thursday, July 12, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Mana gbanwere obi m. Mee atụmatụ B - ka anyị gbaa egwu!
Pịa site na post ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ vidiyo ahụ. Taa, ahapụrụ m nwa m nwoke na IUPUI iji gaa Freshman Orientation. Ọ dị m ka ịgba egwu.
Ndenye Blog: Nka na ụzụ
Jul 12, 2007 na 11:13 PM
Ekele DK! Ma ọ bụ ka m kwuo, ga-enwe ekele maka Dk!
Jul 14, 2007 na 8:33 PM
Spawn nke DK, hehe. Nke ahụ masịrị m! Kechioma m, ọ na-ama na-eme ọtụtụ ihe ndị nwere ọgụgụ isi mkpebi na ndụ ya karịa ka m bụ mgbe m bụ 18!
Jul 13, 2007 na 2: 55 AM
ee, a na m amasi Scrubs kwa, na clips ha na youtube di nma, ya mere ka anyi gbaa egwu 🙂
Jul 13, 2007 na 8: 14 AM
Ah, uzo ohuru na IUPUI… na-eweghachi ihe ncheta. Ihe m na-agaghị enye nwere niile m "klas" na 2.5 ụbọchị n'izu ọzọ.
Ọ bụ ugbu a ka m matara na m kacha nwee ohere na-aghọ a nde mmadụ web entrepreneur bụ n'oge mahadum (oge m na-ezighị ezi chere na m na-na a ga-akwadebe maka "ndụ n'ezie.") 🙂
Achọrọ m ka nwa gị nwoke nke ọma ma nwee olile anya na ọ ga-enyocha echiche ọ bụla dị n'isi ya n'oge ọ nọ na IUPUI.
Jul 13, 2007 na 9:30 PM
akwa, ya mere, ka gba egwu
Jul 14, 2007 na 1:28 PM
Biko, onwere onye maara aha egwu? Daalụ! Nnukwu egwu na vidiyo! 😀
Jul 16, 2007 na 2: 54 AM
Chaị, Doug, daalụ maka ịkekọrịta. Na-emekwa ka m chọọ ịgba egwu, 😉
Jul 16, 2007 na 6: 29 AM
Bet nzọ, Robyn!